Mamaly Ny Fanontanian’ireo Mpiserasera Ny Filohan’i Mozambika, Saingy Miala Amin’ireo Fanontaniana Sarotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Português
Pikantsary tamin'ny lahatsary “Anontanio ny Filoha” tao amin'ny Facebook.
Nametraka fomba vaovao hifandraisana amin'ny olom-pirenena ao amin'ny aterineto, antsoina hoe “Anontanio ny Filoha” ny filohan'i Mozambika, firenena izay latsaky ny 5% monja amin'ny mponina no manana aterineto.
Nisahana ny birao ambony indrindra nanomboka tamin'ny taona 2015 i Filipe Nyusi, tonga teo amin'ny fitondrana izy tamin'ny fotoana niatrehan'ny firenena ny krizy ara-politika noho ny fifandonana ara-miaramila teo amin'ny governemanta sy ny antoko mpanohitra RENAMO.
Miatrika ireo olana ara-toekarena goavana, izay nipoaka taorian'ny fahitana trosa miafina efa ho miliara dôlara nataon'ny filoha teo aloha, Armando Guebuza ihany koa ny governemantan'i Nyusi. Nahatonga ireo firenena mpanome fanampiana hampiato ny fanampiana ara-bola izay tena iankinan'i Mozambika tanteraka izany trosa izany.
Tao amin'ny Facebook, nandrakitra lahatsary manasa ny Mozambikana mba hanontany azy izay tian'izy ireo ho fantatra i Nyusi. Hatramin'izao, namaly ny fanontanian'ny olona telo izy, namaly an'i Meque Levi, Lara Chicha, ary i Daudo Saide. Ny roa dia nankasitraka ny zava-bitany ary ny fahatelo izay nangataka ny filoha mba ho avy hijery ny fari-piainan'ny olona mahantra eo an-toerana kosa dia novalian'ny tamin'ny fampanantenana tsy mazava fa “hisy olona ho avy any.”
“Rahoaviana ny fanazavana momba ny trosam-panjakana?
Na dia tsara aza ny tao amin'ny lahatsary, nahitana fanakianana maromaro ireo fanontaniana napetraka tao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Marcos Miony naniry ny hahafantatra momba ny tantara ratsy mikasika ny trosa miafina:
Rahoviana ny fotoana ahafahana manazava ny trosam-panjakana, na dia mihevitra aza ny olom-pirenena fa ny fitavozavozana dia avy amin'ny zava-misy fa avy amin'ny filoha manana anarana manomboka amin'ny iray amin'ny litera ABCD [fanafohezana ny litera voalohany amin'ny anaran'ireo olona ahiahiana ho tafiditra amin'ny hosoka].
Fatima Mimbire, avy ao amin'ny Foibe ho an'ny Fahamendreham-bahoaka (Center for Public Integrity), ivontoeram-pikarohana ao an-toerana izay manadihady momba ny kolikoly, nanontany hoe:
Atoa Filoha, rahoviana isika no hanao fanarahamaso ny tetikasa mifandraika amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao amin'ny firenena, mba hahazoana antoka fa mandoa izay tokony haloany amin'ny fanjakana ireo orinasa? Amin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao, ilaina ny manamafy ny fepetra ary izany dia midika fa tsy maintsy miantoka isika fa mandoa ny vola tokony haloany any amin'ny fanjakana, amin'ny resaka hetra ny tsirairay.
“Nahoana Andriamatoa Filoha no mamela ny vahoakany ho faty haingana tahaka izao?”
Lucas Chave nanontany ny filoha mikasika ny fidangan'ny vidim-piainana:
Atoa Filohan'ny Repoblika hajaina, manantena aho fa ao amin'ny kaontinao media sosialy ofisialy, manana ahiahy tena maika tiako ambara aho izay mendrika dinihana manokana, miresaka momba ny vidim-piainana iainantsika aho, rahoviana ny vahoakan'i Mozambika vao hahatsiaro ho maivamaivana? Toa mitombo isan'andro ny vidin'ny vokatra ara-tsakafo, tsy lazaina intsony ny hetra sy ny tolotra.
Tahaka izany koa, Cris Smart Ebenezer Malate nanontany hoe:
Tsotra ny fanontaniako: Nahoana ny Filoha no mamela ny vahoakany ho faty haingana toy izao? Mijaly loatra ireo vahoaka izay nifidy azy, izay izy no lehiben'izy ireo. Niakatra ny vidin'ny mofo, niakatra [ny vidin'ny] vokatra ara-tsakafo ho an'ny filàna fototra, nidangana ny vidin'ny angovo avy amin'ny EDM [Electricidade de Moçambique, orinasan'ny angovo], toa hiakatra koa ny [vidin-]tsolika. Faly amin'ny fijalian'ny vahoakany ve Andriamatoa Filoha?
‘Fanontaniana sy tsikera … tsara kokoa noho ny fiderana, satria manery antsika hisaintsaina izany.’
Valentim Victor, mponina ao amin'ny faritanin'i Zambézia ao afovoan-tanàna, indray nanahy ny kalitaon'ny làlana:
Arahabaina ianao Filoha hajaina, mendrika filoham-pirenena manana fanetren-tena, fifandraisana amin'ny vahoaka tahaka izany i Mozambika, saingy tiako ho fantatra raha misy drafitra hanavaozana ny lalana N1 indrindra ao amin'ny ampahan-dalana Gorongosa-Caia? Ary raha misy ny drafitra hanaovana tara ny lalana Morrumbala-Zero?
Ary ny sasany, toa an'i Julião João Cumbane, kosa niaro ny hevitry ny tsikera ao anatiny sy ny tenany:
Tsara kokoa noho ny fiderana ny Fanontaniana sy fanakianana, na dia mety ho ratsy fipetraka sy miteraka fahatezerana aza, satria manery antsika hisaintsaina izy ireo. Manana ny lanjany ny fiderana, rehefa tena marina satria milaza amintsika fa mizotra amin'ny làlana tsara isika. Saingy sarotra matetika ny manavaka ny fiderana marina avy amin'ny fandokafana. Ny tsikera, na dia mety avy amin'ny fialonana aza, dia misy zavatra tsara foana. Manome lanja ny tsikera sy fanontaniana mihoatra noho ny fiderana aho, satria afaka mianatra zavatra bebe kokoa aho amin'izy ireny.